Ny hamantarana fa « surdoué » ny zaza …
Fitaovana madinika tsy tapaka ao an-tokantranon’ireo manana zazakely ny « coton-tige », mba hanadiovana ny sofiny na ny orony. Fantaro anefa fa tsy tsara intsony ny mampiasa azy ireny ary nanomboka tamin’iny taona 2018 iny dia efa nofoanana teny amin’ny tsena frantsay izy ireny. Inona indray izany no hasolo azy, raha izany ?
Avy niteraka : Ny atao mba hahafisaka ny kibo …
Fikambanan’ny tavy, fihoaran’ny hoditra, ary hozatra niitatra nandritra ny vohoka, no mampibontsina ny kibon’ny vehivavy avy niteraka. Mahatonga ny endrik’ilay kibo ho toy ireny mbola mitondra zaza ireny foana izany, raha tazanina.
Ireo fomba hanosehana ny fihetsehan-jaza
Rehefa manakaiky ny daty vinavinaina hahaterahan’ny vehivavy mitondra vohoka, dia efa mihainohaino sy miandry ny fihetsehan-jaza izy. Raha toa aza ka dify izany daty izany dia tsy maintsy manatona mpitsabo. Ho an’ireo vehivavy fahiny, miandry ny andro hahaterahana dia ireto no fomba ataony hanafainganana ny fahatongavan’ny zaza, raha sendra tara izany…
Betsaka amin’ireo ray aman-dreny manan-janaka fetsifetsy, na mahay kokoa mihoatra noho ny sasany, na mahataka-javatra mihoatra ny tokony ho hain’ilay zaza eo amin’ny salan-taonany, no manontany tena hoe : sao « surdoué » na lasa aloha loatra ilay zaza. Misy ny fambara azo hanamarinana izany, arakaraky ny taonany sy ny fihetsika ataony…
Latsaky ny 6 volana
Raha vao teraka ny zaza « surdoué » dia misy azo itarafana azy sahady. Mihiratra foana ny masony ary avy dia mijerijery sy manezaka be ny masony, fa tsy dia sondrian-tory lava na matahotra hazavana. Miezaka mifandray avy hatrany amin’ireo mandray azy matetika, amin’ny alalan’ny fandinihina izy. Mety hahavita handinika olona, na zavatra iray mandritra ny 8 minitra tsy miato izy, raha 5 minitra ny an’ny zaza tsotra. Mahery minono be ihany koa.
6 volana hatramin’ny 1 taona
Mandinika tsara izy vao maneho fihetsika faly na sorena. Tia minono tanana foana koa, ary diniho fa rehefa manao izay fihetsika izay izy dia hieritreritra sy hampiasa saina. Eo amin’ny faha-8 volana eo izy dia efa hahay hanolotra tanana amin’ny zavatra angatahiny ary sorena be mihitsy raha vao tsy azony izay ilainy. Lasa aloha ihany koa ny lelany noho ny tongony. Matetika dia tsy mandady izy ireny, fa vao avy mipetraka dia mandrazona hitsangana sahady. Eo anelanelan’ny 9 hatramin’ny 10 volana izy dia efa mamindra.
1 hatramin’ny 2 taona
Tia sary ary voasariky ny boky misy kisarisary ilay zaza. Eo amin’ny faha-14 volana hatramin’ny faha-16 volana indray dia efa mahatonona fehezanteny feno. 2 taona katroka izy no miteny tsara tsy mibadabada toy ny zaza hafa. Zaza lian-dava koa izy, mihetsiketsika ary tia mikitikitika zavatra, manandrakandrana zava-baovao isan’andro. Tia miaka-midina amin’ny tohatra amin’ny tsy misy antony mazava. Ny hamaritana azy koa dia tena tia torimaso be izy, eo amin’ny faha-2 taonany eo. Matanjaka be izy, mahery misakafo be, kanefa mora vizana.
2 hatramin’ny 4 taona
Maranitra orona sy sofina ary lela izy eto amin’ity salan-taona ity. Mora mahay manavaka feo, tsiro na fofona. Be fanontaniana be ihany koa ary mahay manao tezitra sy miavonavona mandritra ny fotoana maharitra. Tena mahatadidy zavatra iray izy rehefa mipetraka ao an-dohany izany. Tadidiny ny fotoana, ny zavatra niseho, ny olona… Any an-tsekoly izy dia mahay be amin’ny fotoana iray, fa amin’ny fotoana iray kosa dia tsy mandeha amin’izay laoniny mihitsy ny zavatra ataony. Mahay manao sary be, raha mitaha amin’ireo mitovy aminy. Tia manao “peinture” ary mahafehy tsara ny “coloriage”. Rehefa 4 taona izy dia hila hitovy fanaovana sary amin’ireo zaza 8 taona.
4 hatramin’ny 6 taona
Sorena izy rehefa misy zavatra tiany atao kanefa tsy hainy, na ratsy vita. Tsy havanana amin’ny « graphisme » ihany koa izy any an-tsekoly. Haingana be izy mieritreritra, fa ela be izy rehefa manoratra. Tiany ny manisa sy ny manodidina ny isa rehetra. Liana amin’ny resaka fahafatesana sahady, ny aretina, ny fiavian’izao tontolo izao… mandinika fiarahamonina be izy eto. Vitsivitsy ny namany, mora mianjera koa izy rehefa milalao, mitokantokana.
“Lasa aloha loatra” … dia ahoana?
Ny 5%-n’ny zaza eran-tany no voalaza fa lasa aloha loatra. Tombanan’ireo mpikaroka ho misy zaza 1 na 2 lasa aloha loatra anefa isaky ny sekoly. Mora fantarina amin’ny fahaizany sy ny fitiavany miresaka amin’ny olon-dehibe ny zaza lasa aloha loatra. Tsy mora ho an’ny ankizy any miaina io toetoetrany io : tsy dia mahay miaraka amin’ny ankizy toa azy loatra izy. Azo lazaina ho “manana fahasembanana”, noho ny fahaizany sy ny toetrany ireny zaza ireny, hoy ireo mpitsabo zaza. Betsaka amin’ny ankizy lasa aloha loatra aza no tsy dia mahay fianarana na tsy lasa lavitra be. Mora lasa saina mantsy izy ireny, manonofy lava ary somary mitaredretra. Ilaina, noho izany ny manara-maso azy ireny tsara sy manohana azy hatrany, satria zaza mila tohana ara-pihetseham-po koa izy ireny.